DAAWO SAWIRRO: Beelihii ku dagaallamay Xeraale oo qodobbo muhiim ah ku heshiiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Beelihii ku dagaallamay Xeraale oo qodobbo muhiim ah ku heshiiyay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Beelihii ku dagaalamay Deegaanada Xeraale iyo Huurshe ee Gobolka Galgaduud ayaa shalay heshiis qodobo ka kooban ku kala saxiixday Xeraale, iyadoo uu heshiisku yahay mid lagu dhaqangelinayo is afgaradkii ee beelahaasi laba toddobaad ka hor ku wada gaareen Magaalada Dhuusamareeb.
Hawlwadeeno ka kala socda Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Guddiga Dib U Heshiisiinta Galmudug ayaa goobjoog ka ahaa heshiiska ay dhinacyadaasi ku kala saxiixdeen Xeraale.
Prof. Yaxye Cali Hareeri, La taliyaha Ra’iisal Wasaaraha ahna Xiriiriyaha Tubta Siyaasadda loo dhanyahay ayaa madasha ka akhriyay qodobo ka kooban toban qodob, oo ay beelahaasi ku wada heshiiyeen.
Xildhibaan Sakariye Xasan Gaashaan oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ee laga soo doorto Xeraale oo goobta ka hadlay ayaa beelaha ugu yeeray in ay si wadajira u ilaaliyaan heshiiska.
Odayaal u kala hadlay beelaha heshiiska wada gaaray ayaa si isu mida u sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska nabadeed, ee ay kala saxiixdeen, isla-markaana ay nabadooda ilaashan doonaan.
Sidoo kale Odayaasha Dhaqanka ayaa Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre kaga mahadceliyay juhdiga uu ku bixiyay dadaalka guuleystay ee nabadda lagu kala dhex dhigay dadka wada dhashay ee ku kala dhaqan Xeraale & Huurshe.
Ugu dambeyn, RW Khayre ayaa bilowgii bishan soo jiitay indhaha bulshada Soomaaliyeed, ka dib markii uu dib guryahooda ugu celiyay shacab fara-badan, oo horey uga barakacay Xeraale.
beelihii Xeraale iyo Huurshe